Nezvedu - Wanhe Viwanda uye Trade Co., Ltd.
Wanhe Grass inyanzvi yepamhepo yeInternet brand inosanganisa R&D, kugadzirwa nekutengesa uye yakazvipira kuve yakanakisa mhando yebasa rekupa uye kugadzira mumunda wehuswa hwekugadzira.
Huai'an Wanhe Indasitiri uye Trade Co., Ltd.iri iri kuBhangi reBeijing-Hangzhou Grand Canal ine nzvimbo dzinoyevedza. Iri ndiro guta rekuZhou Enlai, murume akakura wechizvarwa, Guta reHuai'an, Dunhu reJiangsu. Xinchang Railway uye Beijing-Shanghai Expressway kupfuura nomuguta pamwe nyore chokufambisa. Huru zvigadzirwa ndevemitambo huswa uye nzvimbo huswa uye zvimwe zvigadzirwa nefekitori yedu. Isu takasimbisa hurefu uye hwakagadzikana kudyidzana hukama nevatengesi vazhinji nevamiririri mukati memakore makumi maviri apfuura Kutengesa kunze kwakave zvinopfuura makumi masere muzana ezero rekutengesa.
Wanhe ane ruzivo rwekukura uye yakakwana michina yekugadzira.
Yega yega semusangano ine yakarongedzwa yekuongorora kamuri, yakazara yekuongorora michina nezvimwe, iyo michina yakagadzirirwa neyedu mainjiniya kana kupinza kubva kune imwe nyika. Yese yekugadzira tambo inogona kugadzira anopfuura 1500 mativi emamita huswa hwekugadzira zuva rega rega. Inogona kugutsa mhando dzese dzevatengi uye huwandu hunoda.
Wanhe Grass Nguva Dzese Inonamira kuSainzi Yekuvandudza Concept
Tekinoroji uye Kuvandudza Tarenda seKambani Dzekusimudzira Zvinangwa
Kubva payakagadzwa, iyo mhando yakagara yakanamatira kune yesainzi pfungwa yekusimudzira, uye yagadzira tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira uye vashandi kudzidzisa zvinangwa zvekambani zvekuvandudza. Dhipatimendi rakakosha rekutsvagisa nekusimudzira rakamiswa, uye timu yehunyanzvi yeR & D ine hunyanzvi hwekudzidza uye hwakasimba hunyanzvi hwekugona hunosimbiswa. Iyo mhando inotarisisa kuunganidzwa uye kurimwa kwematarenda, uye kunotora hunyanzvi hweR & D vashandi kwenguva yakareba kuti varambe vachifumisa timu yeR & D. Panguva imwecheteyo, kambani inogara ichipa ruzivo rwehunyanzvi kune vanhu varipo, uye icharonga zvakare kuongorora nekudzidza kubva kune mamwe makambani, nekuenderera mberi nekuvandudza ruzivo rwehunyanzvi uye kugona kugona kwevashandi veR&D.
Mucherechedzo unokoshesa zvakanyanya pakutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvitsva. Gore rega rega, yakaisa mari yakawanda mukutsvaga nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva, uye yakawana mhedzisiro. Pakati pavo, zvitupa zvitatu zvepamutemo zvakawanikwa, uye mhando dzakasiyana dzakagadzirirwa nzvimbo dzakasiyana dzekushandisa. Mune iro nyowani chigadzirwa chigadzirwa basa, iyo mhando inosimbisa kuchinjanisa uye kubatana pamwe epamba ekutsvagisa masangano zvinoenderana nehunyanzvi hwekuvandudza uye musika kudiwa, uye kuburikidza nesainzi sumo uye mushandirapamwe budiriro, mhedzisiro yesainzi mhedzisiro inoshandurwa kuita kuita nekukurumidza sezvinobvira, ichigadzira mabhenefiti emakambani .
Huai'an Wanhe Indasitiri uye Trade Co., Ltd.iri iri kuBhangi reBeijing-Hangzhou Grand Canal ine nzvimbo dzinoyevedza. Iri ndiro guta rekuZhou Enlai, murume akakura wechizvarwa, Guta reHuai'an, Dunhu reJiangsu. Xinchang Railway uye Beijing-Shanghai Expressway kupfuura nomuguta pamwe nyore chokufambisa. Huru zvigadzirwa ndevemitambo huswa uye nzvimbo huswa uye zvimwe zvigadzirwa nefekitori yedu. Isu takasimbisa hurefu uye hwakagadzikana kudyidzana hukama nevatengesi vazhinji nevamiririri mumakore apfuura makumi maviri emakore.Exports yakaverengera anopfuura makumi masere muzana ezveruzhinji kutengesa.To kusangana zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nevashandisi, isu tinopawo OEM neODM sevhisi.
Kambani yedu inogadzira uye inotengesa ese marudzi emhando yemitambo uye zvigadzirwa zvemamiriro ekunze, izvo zvakakunda kurumbidzwa kubva kune vatengi munyika yese kwemakore mazhinji. Gadzira kukosha kwevatengi nehungwaru hwedu uye ziya. "Kubvumirana ndiko kwakakosha uye kwakasimbiswa mukutenda" kutenda kwevanhu vese zviuru gumi. Isu tinofanirwa kutevedzera kune vebhizinesi mweya we "kutendeseka, pragmatism, hunyanzvi uye kusimudzira" uye nekupa mipiro yakawanda kuchinangwa chedzidzo.
Gore rega rega isu tinotora chikamu mune dzinoverengeka zvekumba uye zvekunze maindasitiri kuratidzira, panguva imwechete kushanyira vatengi uye kutaurirana bhizinesi.
Isu tichaendesa yakanakisa logistic sevhisi zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi wega wega.
Kuti usangane nezvinodiwa nemushandisi zvakasiyana, Wanhe Grass inopa mhando yepamusoro yeOEM / ODM yekugadzirisa masevhisi emakambani epasirese, ayo anoona seimwe yeanokosha masevhisi ekambani kusimudzira kwenguva refu. Zvese zveOEM / ODM zvinodiwa zvinotarisirwa nechikwata chakazvipira chebudiriro yechigadzirwa uye zvemutemo. Guarantee kune echinyakare mamodheru, parameter, zvinyorwa, mabrochure, kurongedza, nezvimwe, uye kudzora kwemhando nekuomesa mhando yekutarisa maererano nechikumbiro chako. Isu tichaita nemoyo wese zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuti vape yekutanga-kirasi mhando uye sevhisi, tinokubatsira iwe kugadzira yako yega mhando.
Chivimbiso chakasimba: zvigadzirwa zvese zvinosarudzwa neinjiniya wehunyanzvi. Emaitiro maInvoice anovimbisa kutenga uye kushandisa kodzero.
Kugadzira uye Dhirivhari
Izvo zvinhu zvakatengwa muwebhusaiti yepamutemo uye chitoro chemureza zvinotumirwa kubva kudura rekambani. (Kunze kwezvakakosha zvigadzirwa)
Yakajairwa: Kutumira nenyika, mhepo uye chikepe (Ndokumbira utaure kana iwe uine chakakosha chinodikanwa)
Kuona kuti kuteedzerwa kwehunhu hwese hwechigadzirwa uye mhinduro zvinogona kugadziriswa nekufamba kwenguva, kuti uwane kutaurirana kwakanyanya newe, saka zvirinani kupa nhamba yechibvumirano inogona kuteverwa kune rese data kana kugadzirwa.
Landscaping Grass Yenzvimbo Yenzvimbo, Chakagadzirwa Gorofu Grass, Bhora Turf Uswa, Astro Turf Nhandare Yemunda, Kutevedzera Grass Carpet, Tsvina Yakagadzirwa,